365 Torohevitra fampiasa amin'ny sary mahasoa tokoa | Famoronana an-tserasera
365 torohevitra tena ilaina amin'ny sary
Hanomboka ny taona vaovao isika ary ho toy ny fanomezana Krismasy dia tiako hizara aminareo fitaovana iray manintona izaitsizy tokoa. Boky mifantoka amin'ny tontolon'ny sary izany Filankevitra 300 mahery no misy azy, 365 manokana. Mety ho an'ireo izay manana ambaratonga fototra na antonony mihitsy ary liana amin'ny fanitarana azy ireo. Amin'ity ebook ity dia ho mora toy ny mampihatra torohevitra isan'andro. Ho fanampin'izany, ny fahatsorana anoratana azy dia mahatonga azy io ho azon'ny olon-drehetra jerena, na firy na firy teôria.
Torohevitra momba ny sary 365 dia fanangonana mahafinaritra ireo torohevitra momba ny sary nalaina ho an'ny mpaka sary tsy miankina tsotra ary nosoratana tamin'ny fomba tsotra fa mora sy mora ampiasaina ny fampiharana ny iray amin'ireo torohevitra na torohevitra. Ny sakany amin'ny lohahevitra sy ny hevitra fonosin'ity asa ity dia tena malalaka: Manome torohevitra azo ampiharina amin'ny prisma amin'ny firaketana, ny saripika, ny sary an-tsary, ny sary ara-panatanjahantena, ny teknika ary mazava ho azy fa misy fiantraikany amin'ny toe-javatra, fakantsary, solomaso ary kojakoja samihafa. Voasoratra sy novolavolaina tamin'ny fomba rehetra izay rehetra mamaky azy dia afaka mampiasa azy ary mampihatra ireo torohevitra ireo amin'ny filaharana heveriny sy manaraka ny fomba fiasa heveriny. Azonao atao ny mamaky azy manomboka amin'ny farany na amin'ny voalohany satria singa mahaleo tena mifantoka amin'ny olana isan-karazany eo amin'ny tontolon'ny sary izy ireo.
Aiza no ahafahanao misintona an'ity Ebook mahafinaritra ity? Noho izany dia tsy maintsy miditra fotsiny ianao ity rohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 365 torohevitra tena ilaina amin'ny sary